Fantatrao ve ny orinasao momba ireo metatra efatra lehibe? | Martech Zone
Fantatrao ve ny orinasao momba ireo metatra efatra lehibe?
Alakamisy, May 24, 2007 Asabotsy, Aogositra 4, 2007 Douglas Karr
Nihaona tamina mpitarika mahatalanjona teo an-toerana aho tsy ela akory izay. Areti-mifindra ny fitiavany ny indostria misy azy sy ny fotoana mety nananany. Niresaka momba ny fanambin'ny indostrian'ny serivisy izay anaovan'ny orinasany marika azy izahay.
Indostria henjana izy io. Tery ny teti-bola ary mety hahatsapa ho tsy voavaha ny asa indraindray. Rehefa nifanakalo hevitra momba ireo fanamby sy vahaolana izahay dia nahatsapa fa nidina tamin'ny paikady 4 lehibe izany.
Miankina amin'ny asanao, ny metrika mifandraika amin'ireo paikady ireo dia hiova. Tokony hanana metrika mifandraika amin'izy ireo ianao. Tsy afaka manatsara izay tsy refesinao ianao!
Ny fahafaham-po dia zavatra izay manoratra fisoratana roa ho an'ny orinasanao. Mety efa naheno ilay 'whew' daholo isika taorian'ny nialan'ny mpanjifa tsy afa-po taminay. Fa ny tsy raharahaintsika matetika dia ny filazan'izy ireo amin'ny olona sasany hafa ampolony fa tsy nahafa-po azy ireo. Ka… tsy mpanjifa very fotsiny no very, fa very kosa ny vinavina fanampiny. Aza adino mihitsy fa ny mpanjifa (sy ny mpiasa) nijanona satria tsy nahafa-po azy ireo dia miteny amin'ny olon-kafa!
Satria tsy mihaino ilay orinasa manompo azy ireo dia handeha hiteny amin'ny olon-kafa fantany izy ireo. Ny marketing amin'ny vava dia tsy zavatra resahina ampy, fa mety hisy fiatraikany lehibe indrindra amin'ny orinasa - tsara sy ratsy. Ireo fitaovana toy ny Internet dia manamafy ny tsy fahafaham-po.
Hamarino tsara fa manamarina ny haavon'ny mari-panan'ny mpanjifanao ianao (fa afa-po). Ny mailaka tsotra, ny antso an-tarobia, ny fanadihadiana ary ny maro hafa dia mety hampisy fahasamihafana eo amin'ny tendrombohitra. Raha tsy manana fotoana hitarainana aminao ry zareo dia hitaraina amin'ny olon-kafa izy ireo!
Ny mpanjifa afa-po dia mandany bebe kokoa ary mahita mpanjifa bebe kokoa ho anao.
Ny fitazonana dia ny fahafahan'ny orinasanao mitazona ny mpanjifa mividy ny vokatrao na serivisinao.
Ho an'ny tranonkala iray, ny fihazonana dia ny isan-jaton'ny mpitsidika tsy manam-paharoa izay miverina. Ho an'ny gazety, ny fihazonana dia isan-jaton'ny isan-tokantrano manavao ny famandrihana. Ho an'ny vokatra, ny fihazonana dia ny isan-jaton'ny mpividy izay mividy ny vokatrao indray taorian'ny voalohany.
Ny fahazoana dia paikady hisarihana mpanjifa vaovao na fantsom-pizarana vaovao hivarotra ny vokatrao. Ny dokam-barotra, ny marketing, ny referrer ary ny Word of Mouth dia paikady rehetra tokony hampiasanao, handrefesana ary hanome valisoa.
Aza adino… lafo kokoa ny fahazoana mpanjifa vaovao noho ny mitazona ny efa misy. Ny fitadiavana mpanjifa vaovao hisolo ny iray nijanona dia tsy mampiroborobo ny orinasanao! Miverina any amin'ny par. Fantatrao ve hoe ohatrinona ny vidin'ny mpanjifa vaovao?
4. Mahazo tombony
Ny tombom-barotra, mazava ho azy, dia ohatrinona ny vola sisa tavela aorian'ny fandanianao rehetra. Raha tsy mahazo tombony ianao dia tsy hiasa ela be. Ny maridrefy dia ny halehiben'ny tahan'ny tombom-barotra… maro ny olona no mijery akaiky an'io nefa indraindray misy lesoka. Wal-mart, ohatra, dia manana tombony ambany dia ambany nefa izy ireo dia iray amin'ireo orinasa mahasoa indrindra (amin'ny habeny) eto amin'ny firenena.
Ny ankanavaka amin'ireo rehetra ireo, mazava ho azy, dia ny Governemanta.
Fikarakarana hetsika any Carolina
May 24, 2007 ao amin'ny 9: 08 PM
Lahatsoratra mahafinaritra! Tia ny fomba fijerinao, indrindra amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa. Misaotra.
May 25, 2007 ao amin'ny 2: 05 PM
Ny hany zavatra mampiavaka ny magazay, magazay, orinasa na fikambanana eny an-dalambe dia ny serivisinay. Mampalahelo fa be dia be ny orinasa tsy mahatratra ny andrasana akory, mihoatra lavitra noho izany. Lahatsoratra tsara ary tokony ho fampahatsiahivana tsy tapaka ho an'ny orinasa rehetra izay miahy ny serivisy.
May 25, 2007 ao amin'ny 5: 12 PM
Lahatsoratra tsara dia niezaka nitahiry azy ho matsiro… nefa hanisy marika azy io… !! Fandinihana tsara!
May 28, 2007 amin'ny 11: 44 AM
TPT! Tiako ny fitanisan'ny governemanta amin'ny faran'ity lahatsoratra ity! Tena marina izany. Tsy maninona izay antoko manao ny seho, tsy afa-po amin'ny kongresy ny olona, ​​tsy afa-po amin'ny filoham-pirenena, ary maro amin'ireo governemanta ao an-toerana sy any amin'ny distrikan'izy ireo aza.
Ary fantatrao inona ??? 6 volana eo ho eo monja amin'ny fe-potoam-piasan'ny solontena no karakarain'ny governemanta - mandritra ny fifidianana indray!